Ka Dib Isticmaalka Kaniinka
I. Maxaad dareemi kartaa ka dib isticmaalka kiniinka ilma soo ridka??
II. Waa maxay astaamaha ka sii darku?
Maxaad Dareemi Kartaa Ka dib Isticmaalka Kiniinka Ilma iska soo ridka?
Ka Dib Isticmaalka Kaniinka Mifepristone
Haweenka qaarkood way dhiig bixi karaan ka dib qaadashamifepristone. Kuwakale labbaduba waa caadi.
Ka Dib Isticmaalka KaniinkaMisoprostol
Majiirka iyo dhiig baxu waa saamaynta ugu muhiimsan. Astaamahan waxtar ayay leeyihiin sababtoo ah waxay muujiyaan dawooyinka inay shaqaynayaan. Laakiin, Majiir inteeleeg iyo dhiig bax ayaad yeelan doontaa ?
Haweenka qaarkood, majiirka waa xooganyahay — aad uga xanuun badanyahay majiirka dhiiga caadada (haddii aad leedahay majiirka dhiiga caadada)
Dumarka qaar, dhiig baxuwuu ka culusyahay kan caadada caadiga ah. Sidoo kale waa caadi inay ka timaado dhiig xinjiro wata dhawrka saac ee hore ka dib qaadashada misoprostol. Cadadka xinjiraha way kala duwanaan doonaan ayadoo ku xiran inta uu uurku ahaa.
Hawenka qaarkood, majiirka waa degenyahay oo dhiig baxo waa sidii dhiiga caadiga ah ee caadada.
Ha nixin haddii dhiigbax badan iyo majiir aad leedahay ka badan dhiiga caadada caadiga ah.
Haddii aad la kullanto majiirka xun ibuprofiin waa dawo fiican oo wax ka qabata xanuunka. Waxaad ka iibsan kartaa ibuprofin 200mg awooda leh iyaddoon la qorin la iibsado (qoris la’aan) badanka wadamada. Qaado 3-4 kiniin ah (200mg) 6-8 saacadood oo kasta. Tani xanuun kaaga way ka soo rayn doontaa.
Sida aad rabto ayaad u cabi kartaa una cuni.
Isku day inaad joogto meel raaxo leh ilaa aad ka fiicnaato.
Dumarka badankoodu waxay soo fiicnaadaan in ka yar 24 saacadood.
Fiiro: Kadib labba todobaad ilma iska soo ridkaaga, baadhitaanka uurka waxa uu noqon doonaa sidii mid leh iyaddoo ay sababtay hormoonada ku sii hadhay jidhkaaga, haddii aad dareento astaamaha uurka (leedahay jilayca naaska, yalaalugo, daal, iwm) ka dib isticmaaalka kiniinka, booqo dhakhtar.
Waa maxay astaamaha ka sii darku?
Marka laga gudbayo uurka, astamaaha sare waa caadi. Hoos waxaa ah calaamadaha khatarta aad ugu jiri karto inay ka sii daraan.
Qadarka dhiig baxa culus.Haddii aad qoyso labba xafaayada dadka wayn ah saacadiiba ilaa 2 saacadood oo isku xiga ka dib markaad u malayso inaad soo saartay uurkii, tani waa dhiig bax wayn. Waa inaad raadisaa kaalmo caafimaad haddii aad sidan badan u dhiig baxdo. Qoyntu waxay la micno tahay xafaayada ayaa si buuxda loogu qooyay dhiig, hore ilaa dib, dhinac ilaa dhinac, iyo si kasta ilaa si kasta.
Xanuun xoogan.Haddii aad leedahay xanuun xoogan oo aan ka soo rayn ka dib qaadashada ibuprofen, raadso caawimo caafimaad. Xanuunkan aadka u daran waxa uu la micno ahaan karaa inaad yeelan karto ka sii daris la xidhiidha uurka. Xanuun aan la xalin aanay bogsiin ibuprofen waxay noqon kartaa calaamada xanuunka. Waxaanu ku talinaynaa haweenay kasta oo uur leh inay raadsato caawmo caafimaad.
Dareemaya xanuun aad ahWaxaad yeelan kartaa xummad, yalaalugo iyo matag maalinta aad qaadato misoprostol. Tani waa caadi. Waa inaad dareentaa ka sii waanagsanaan iyo ka sii wanaagsanaan maalin kasta ka dib isticmaalka kiniinka ilma soo ridka. Waa inaanad bukaan dareemin maalin kasta oo aad isticmaasho misoprostol, waa inaad raadisaa daryeel caafimaad.